Izinto ezincinci zenza umhluko | News24
Izinto ezincinci zenza umhluko
Abazali kunye nabafundi besikolo samabanga aphantsi iVuyani bavuyela iimpahla zesikolo ezintsha.UMFANEKISO: unathi obose
Bebengayivali imilomo abazali babafundi besikolo samabanga aphantsi iVuyani eGugulethu ngexesha abantwana babo bephiwa iimpahla zesikolo ezintsha ngu Sinethemba Betela owayesakuba ngumsebenzi wethutyana kwesi sikolo.
Lishumi elinesibini labafundi abathe baxhamla kweli phulo.
Phakathi kwezinto abathe bazifumana kuquka iibhulukhwe zesikolo, impahla yangaphantsi, izihlangu zesikolo, iikawusi kunye neejezi ezimbini.
Omnye wabazali uNosiphathise Sajini ulincome ngokungazenzisiyo eli phulo. Ukwa lichaze nje ngoncedo ebantwaneni nakubazali. “Ndonwabe kakhulu emphefumlweni bendingalindelanga ukuba umntwana wam angafumana ibhulukhwe yesikolo entsha mahala. Bendingakwazi ukumthengela kuba nditsala nzima,” utshilo uSajini. Uthembisile ukuba uzakumjonga unyana wakhe ukuba ayiphathe kakuhle.
U-Betela, onama 22, uthe wachukunyiswa ziimeko abanye babafundi ababekuzo ngethuba esenza uqeqesho kwesi sikolo kunyaka ophelileyo.
“Ngexesha ndandisenza uqeqesho ndaqaphela ukuba abafundi abaninzi banxiba impahla ezigugileyo,” utshilo Betela.
Uthe wahamba ecela amalizo kumalungu ecawe yakhe nakubahlobo ukuba bamncedise. Ubongoze nabanye abantu, kuquka oosomashishini, ukuba bancede apho bakwazi khona. “Akunyanzelekanga ukuba ubesisigwili ukuze unikele emntwini ohluphekileyo. Lonto incinci unayo iyawenza umahluko komnye umntu. Aba bantwana bazinkokheli zangomso. Kufuneka ukuba sibakhuthaze banyamezele esikolweni ukuze babenekamva eliqaqambileyo,” ucacise watsho.
Inqununu yesikolo uMahlubi Ngqukuvana ubambe ngazo zozibini ngendima edlalwe nguBetela. Ulichaze inyathelo lakhe njengento ekhuthazayo ebantwaneni kunye nasezifundweni zabo.
“Xa umntana wesikolo enxibe impahla yesikolo epheleleyo imenza naye azithembe. Iyamkhuthaza nokuba ahambe isikolo rhoqo,” utshilo uNgqukuvana. Wongeza ngelithi inkoliso yabafundi kwisikolo sakhe baphuma kumakhaya ahlelelekileyo nangathathintweni.
Omnye wabafundi ofumene izihlangu kunye nelokhwe yesikolo uAyola Bangiso,12, nofunda kwibakala lesithandathu (Grade 6) uthe uvuya kakhulu, watsho ethembisa ngokuqinisekisa ukuba impahla yakhe yesikolo ihlala icocekile.